အရွယ်ရောက်ပြီးညစ်ညမ်းဂိမ်းများအတွက်:အခမဲ့ရာက္ဇာ Xxx ဂိမ်းခေါင်းစဉ်
ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳအရွယ်ရောက်ပြီးညစ်ညမ်းဂိမ်းများ–သင်ဖြစ်နိုင်၏မကြားပြီးခင်၊လက်ျာ? မ၊သင်ချစ်ရန်သွားကြသည်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကရရှိပါသည်စတိုးဆိုင်၌အသင်တို့အဘို့အ! ပေး၊၏ဟုတ်ပါတယ်၊ခင်ဗျားအတော်ပင်သူတစ်ဦးကစားဆှကိုအွန်လိုင်းဂိမ်း။ ကတည်းကကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးစတင်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကခဲ့ချက်ပြုတ်တက်စိတ်ကူး XXX ခေါင်းစဉ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေသောအကြောင်းရင်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခုသာအကြောင်းပြချက်:သင်၏ပည္ဆိုင္ရာ! ဒါဟာအလွယ်ကူဆုံးကိုလူလောကအတွက်၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့သေချာနေကြောင်းတာအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတို့အတွက်အလုပ်။ ဒါဟာအလုပ်လုပ်မှာပြီးခဲ့သည့် ၄ နှစ်နှင့်အထက်နောက်ဆုံးထားအကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းအွန်လိုင်းဒါကြောင့်လူတိုင်းခံစားနိုင်။, အဘယ်သူမျှမနေပါစေရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်တစ်အခြေခံဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်သငျသညျခဲယဉ်းသင်ချက်ချင်းသို့မဟုတ်အရာတစ်ခုခုကိုပိုမိုရှုပ်ထွေးကြောင်းယူလိမ့်မည်အသက်အရွယ်အရသင်အကြောတယ်လေ။ဒါကြောင့်အားလုံးအတွင်းပိုင်းမှာအရွယ်ရောက်ပြီးညစ်ညမ်း။ အခု–အဘယ်မျှလောက်သင်လာအပေါ်အနည်းငယ်စွန့်စားမှုပေးမယ်အပြည့်အဝမွတ္သားျခင္း၏အဘယ်အရာကိုသင်မြျှောလငျ့နိုငျအထဲမှာရှာတွေ့? ဒါဟာအစဉ်အမြဲကောင်းတစ်စိတ်ကူးအရာကိုသိရန်အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေသင်၏အခြားဘက်ခြမ်းတွင်အပေါက်တစ်ပေါက်၊မှန်သော? ကောင်းစွာ၊ဒီမှာကျွန်တော်ကရှင်းပြဖို့အားလုံး၊ဒီေရစီးပွားရေးမှဆင်း!
ဟုတ်၊အမှန်–ကျနော်တို့အလုပ်ကတိကဝတ်မှမိမိကိုယ်ကိုမိမိမှစတင်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှု၏အဝင်ရောက်ဒီနေရာမှာလုံးဝအခမဲ့:သငျသညျဖို့ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးမှပေးဆောင်ရအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်နှင့်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်။ ပိုပြီးဖွင့်အဘယျသို့၊ကျနော်တို့လုံးဝထောက်ခံအားဖြင့်တစ်ဦး freemium မော်ဒယ်ထောက်ပံ့ပေးကြောင်းစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ် microtransactions သာ-ဂိမ်း။ အဘယ်သူမျှမအကြောင်းအရာလွဲချော်လိမ့်မည်–အသင်နေဆဲအပြည့်အဝအတွေ့အကြုံ–သင်မူကားနဲ့တူခံစားရကူညီမှုအထဲက၊သင်လုပ်နိုင်သည်! ငါထင်သည်ဟုဆိုဖို့ဘေးကင်းလုံခြုံမယ့်ကျော်နှင့်အတူ ၅၀၀၊၀၀၀ အကောင့်ဖန်တီးခဲ့တယ်၊အမှန်ကိုပြောသောဤမှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းကိုဆင်းသွား။, အရွယ်ရောက်ပြီးညစ်ညမ်းဂိမ်းများအဆဲအစောပိုင်းတွင်အတွက်ရက်ပေါင်း၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့စိတ်ချယုံကြည်ကြောင်းသမိုင်းနှင့်အတူရှိသည်နှင့်ကျနော်တို့အနာဂတ်အပေါ်စီစဉ်နေရတဲ့အတွက်နောက်ကျတာထက်အဖြစ်ကောင်းကောင်းတစ်စိတ်ကူး။ အသင်းသည်အမြန်တုံ့ပြန်ရန်လမ်းကြောင်းနှင့်ကျွန်တော်ချစ်ဆောက်လုပ်ဖို့စိတ်ကူးထုတ်ကုန်များနှင့်အညီအမည်လုံးဝ realign သင်သည်အဘယ်သို့စဉ်းစားကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်အပြာဂိမ်းကစား။ ဤအမျိုးအစားအကြောင်းရှည်လျားပြီးညံ့ဖျင်းသော၊ဒါပေမယ့်ကျွန်မတို့လှုပ်သောအရာတို့ကိုပွင့်ပေးခြင်းအားဖြင့်ကမ္ဘာ၏ပထမဦးဆုံးအမှန်တကယ်အရည်အသွေးမြင့်မားစက်အပြောက်များအတွက်ကြောဂိမ်းကစားချင်သောအရှုပ်နှင့်ဂိမ်းတချိန်တည်းမှာပင်။ အကြောင်းအများကြီးမေးရန်အဘို့အ?, ကျွန်တော်ထင်ပါဘူး၊အဘယ်ကြောင့်သောအနေခွင့်ပြုရန်အတိအကျကိုပြုမည်!
နက်ရှိုင်းတဲ့စာကြည့်တိုက်၏နာမတော်သည်ဂိမ်းအတွင်း:သင်တွေ့ပါလိမ့်မယ် ၃၀ ဂိမ်းနှင့်နောက်ထပ် ၅ နိုင်ကြောင်းစမ်းသပ် betas။ ပါကကျေးဇူးပြုပြီးအရွယ်ရောက်ပြီးညစ်ညမ်းဂိမ်းများကိုတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ၁၀၀%တွင်-အိမ်ထုတ်လုပ်မှုစတူဒီယိုအားလုံးဂိမ်းများကိုသင်မြင်ရပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး။ ထိုလမ်း၊ကျနော်တို့သေချာသူတို့ရဲ့အရည်အသွေး၊ပြုပြင်ရေးကိစ္စများအလျင်အမြန်တက်ထားရန်ကျွန်ုပ်တို့၏စံဒါကြောင့်သင်ကတူညီတဲ့အလွန်ကြီးစွာသောဂိမ်းများအခါတိုင်းငါတို့သည်သင်တို့အသစ်ခေါင်းစဉ်။ အခါပွတ်တိုက်တစ်ခု၊ထွက်ချင်မှသေချာအောင်သင်၌လက်ျာလက်၊အယ်? ဆိုလိုတာကတစ်ခုထက်ပိုနည်းလမ်းတွေအတွက်လွန်း!, ဒါပေမယ့်တကယ်-ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ရပ်တွေထက်ကျယ်ကျယ်ပြောရရင်၊အဘယ်ကြောင့်သောအလိုလူတိုင်းပျော်မွေ့ရန်အရွယ်ရောက်ပြီးညစ်ညမ်းဂိမ်းတာဝန်ခံလုံးဝအခမဲ့။ သင်ကမကြိုက်ဘူးလျှင်အတွေ့အကြုံ၊သင်ချက်ချင်းထွက်ခွာ–ပိုကောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းအသိုင်းအဝိုင်း၊အမြင့်မားအခွင့်အလမ်းတွေကိုသင်ကပတ်ပတ်လည်ကပ်လိမ့်မယ်! ထည့်လေ့မရှိကြောင်းအပေါ်ဖိအားသေချာစေရန်ကျွန်တော်တို့ကိုကြမယ်ပေးခြင်းသင်အကောင်းဆုံးသဘောတူညီချက်ဖြစ်နိုင်သော။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးဒဏ္ဍာရီ၏နိယာမအရင်းရှင်လိမ့်မည်ဟုသေချာစေသာင္း၏သဘောသဘာဝ APG လာရန်နှစ်ပေါင်းများစွာ။
လှပတဲ့ဂိမ်းအားဖြင့်လာရန်ခက်ခဲ၊ဒါပေမယ့်သူတို့အားအံဝင်ခွင်သို့မျက်နှာအရွယ်ရောက်တဲ့ပရိသတ်ကိုပင်တစ်မျိုး။ ၏ရလဒ်တစ်ခုအဖြစ်ဤ၊ကျနော်တို့ပြီးကြောင်းသေချာစေရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဂရပ်ဖစ်အရည်အသွေးထွက်သည်ဤလောက၏–သင့်ကိုပေးရုံမှဝင်ရောက်ခွအရာကိုသင်အမှန်တကယ်ချင်တယ်။ ရှေ့ဆက်မသွား၊ကျွန်တော်တို့ဟာပိုကောင်းကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်ကြောင်းသေချာစေရန်ပင်ရှေးရှေးအပေါ်အနိမျ့-အဆုံးစနစ်များရှိသည်မဟုတ်လိမ့်မည်၊မည်သည့်အရေးကိစ္စများ။ ကျွန်ုပ်တို့၏တံစဉ်များကိုနည်းပညာအခုအချိန်မှာတော်တော်လျောက်ပတ်နှင့်တကယ်တော့တဲ့ကိစ္စအဖြစ်၊ကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့အလားရလဒ်နေသောကြောင့်လူကနေအပြေးထက်လျော့နည်းအပေါ်ခေတ်သစ်ဟာ့ဒ်ဝဲ။, သင်ပြုလျှင်ဖြစ်ပျက်ရှိသည်ဖို့အထူးကွန်ပျူတာအပြေးနိုင်စွမ်းတွေမှာလျောက်ပတ်သောအရည်အသွေး–အထက်မကနောက်ထပ်ကြည့်ရှုကျွန်တော်တို့ရဲ့မော်ကွန်းတင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစမ်းသပ်ဖို့! ကျနော်တို့အကြောင်းပြောနေတာချုပ်အဆင့်အလုံြဒီနေရာမှာသင်ဘယ်နေရာမှာမဆိုမတှေ့လိမျ့မညျ။ သငျသညျကွောငျးသိရခဲ့၏အားလုံးဂိမ်းအတွင်းအရွယ်ရောက်ပြီးပြာပုံဖြစ်အားကစားပြိုင်ပွဲပြေးအပေါ်နှစ်ခုလုံးကွန်ပျူတာနဲ့မိုဘိုင်းထုတ်ကုန်? မှန်–သင်ပျော်မွေ့နိုင်အရာအားလုံးကိုရှိသည်အဘယျသို့အဘယ်သူမျှမနေပါစေအပိုင်းအစ၏ဟာ့ဒ်ဝဲသင်ဖြစ်ပျက်အဖြစ်။, ဆာဗာကိုအမြန်ဆုံးသင့်ရဲ့တိုးတက်မှုနှင့်ပြည်ထောင်စုလွန်း၊ဒါကြောင့်စာသားအမှတ်နည်းသည့်အခါသင်သည်ခုတ်နှင့်အပြောင်းအလဲများအကြားတစ်ဦးဖုန်းနဲ့ကွန်ပျူတာအေး!
လူမႈအရွယ်ရောက်ပြီးညစ်ညမ်းဂိမ်းအမှန်တကယ်သည်အခြားအရာတစ်ခုခု:ကျွန်တော်သေချာအောင်လုပ်ချင်သူမည်သူမဆိုတက်လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ကျွန်တော်တို့ကမ်းလှမ်းပေးခဲ့နွေးထွေးသောကြိုဆိုနှင့်ကြောင်း၏ထိပ်တွင်၊စကားပြောစွမ်းရည်ကိုတိုက်ရိုက်ကိုအခါတိုင်းသူတို့လိုခငျြ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖက်ဆာနှင့်အတူထုပ်ပိုးဖြစ်ပါတယ်ဝန်ထမ်းများနှင့်အသင်းအဖွဲ့ဝင်များနေသောလက်ပေါ်မှာသင့်ရဲ့မေးခွန်းတွေကိုဖြေဆိုရန်၊သင်ကူညီနှင့်အတူတိုးတက်မှုနှင့်အပင်ထွက်ကူညီချင်တယ်ဆိုရင်သင်အထောက်အကူ modding မြင်ကွင်းတစ်ခုငါတို့သည်သာ။, မှန်တယ်–ကျွန်ုပ်တို့အားကစားပြိုင်ပွဲများ၏ပမာဏကြီးမားတဲ့စိတ်ကြိုက်နှင့်ပြည်သူ့မှန်မှန်တင်ပြရန်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ထည့်ပါ-တယောနှင့်အတူရာတစ်ခုခုသို့မဟုတ်အခြားအကြောင်းဒါကြောင့်သင်ကခံစားနိုငျမည်သည့်ဂိမ်းအတွက်သင်လုပ်ချင်တဲ့အတူ။ အတူဆက်သွယ်ရေးအသိုင်းအဝိုင်း၊ငါတို့သည်လည်းပြေးလစဉ်ပြိုင်ပွဲ၊ရှင် giveaways နှင့်အပို–အတက်လက်မှတ်ထိုးရန်ကြည့်ရှု၏အားလုံးအေးမြပရိကံရဲ့အသွားအတွင်းရှိအရွယ်ရောက်ပြီးညစ်ညမ်းဂိမ်း!
ဒါကြောင့်၊သင်သည်အဘယ်သို့ဆို? လိုပူးပေါင်းဖို့နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အကြီးမားဆုံး XXX ရပ်ရွာနှင့်အတူအကောင်းဆုံးဂိမ်းအတွက်ညစ်ညမ်းနယ်ပယ်? ထို့နောက်အတွင်းချက်ချင်း–ကျွန်တော်မကိုအခြားဘက်ခြမ်းအပေါ်!